Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed la baxay Xisbiga Midnimo Qaran – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed la baxay Xisbiga Midnimo Qaran
26th February 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullahi (Baadiyow) oo ka mid ah musharraxiintii u tartamay xilka madaxweynaha sanadkii 2012 ayaa maanta shaaciyey xisbi siyaasadeed, kaasoo la magacbaxay Xisbiga Midnimo-Qaran.
War-mutiyeed kazoo baxay xafiiska Dr. Baadiyow ayaa bulshada Soomaaliyeed loogu soo bandhigay xisbigaan.
War-murtiyeedka uu soo saaray Dr. Baadiyow ayaa u qronaa sidan:
Xisbiga Midnimo-Qaran (XMQ) waxaa asaaska loo dhigay 12ka bisha November 2012, hawlihii abaabulka oo soo socday intii muddadaas ka danbeysay waxaa maanta oo ah 26 bisha Feberaayo si rasmi ah ugu soo bandhigeynaa bulshada Somaaliyeed.
Asaasayaasha XMQ waxey wada rumeysanyihiin in dhibka ugu weyn ee Somaaliya soo gaaray ay sabab u tahay kali-talisnimo iyo qaanuun-jebin, loogana bixi karo dhibkaas hadii bulshda laga raro siyaasadda qabiileysan, loona raro nidaam qaran ee dimoqraadi ah oo ku imaan kara xisbiyada badan iyo dawlad-wanaagga. Sidaas darteed, waxaa XMQ go’aansaday inuu u halgamo dhisidda bulsho dimoqraadi ah oo fursadaha helitaanka hantida iyo awoodaha usimanyihiin muwaadiniintu, dhawreysana dhaqanka soo-yaalka ah iyo qiyamka Islaamka.
XMQ waa xisbi siyaasadeed wadani ah, loogu talagalay inuu isbedel dhab ahna ku sameyo dhaqan siyaasadeedka ka jira dalka. Xisbigu ma aha mid shaqsi furtay, leedahay koox gaar ah, looguna tala-galay in lagu gaaro dana gaaban. Waxaa xubinimadiisa ufurantahay qof kasta oo ku qanca ujeedooyinkiisa iyo aragtidiisa, soona buuxiya shuruudaha kale ee xubinimada. Laamaha Xisbiga waxaa laga furidoonaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Arimaha Xisbiga waxaad kala socon kartaa webka hoos ku qoran.
Dr. Cabduraxman Macalin Cabdullahi (Baadiyow)
Somalia:Prime Minister sets out Government plan to address threat of terrorism